7 स्पेनको लागि तपाईंले यात्रा गर्नु पर्ने चीजहरू – Vocre
1. पावर एडप्टर
संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य देशहरूमा इलेक्ट्रिकल आउटलेटहरू छन् फरक स्पेनमा भन्दा. जब तपाईं आफ्नो वस्तुहरू प्लग इन गर्नुहुन्छ, तपाईं आउटलेटमा प्लग गर्नुहुनेछ जुन २0०V मा उत्पादन गर्दछ 50 हर्ज. प्रिन्गहरू C वा F टाइप पनि हुन्छन्.
यात्रुहरूले पावर एडाप्टर खोज्न चाहान्छन् कि उनीहरूलाई स्पेनमा उनीहरूको सम्बन्धित इलेक्ट्रोनिक्स प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ.
२0०V मा, तल्लो भोल्टेज इलेक्ट्रोनिक्स को एक धेरै हुनेछ ब्रेक यदि ती यी आउटलेटहरूमा प्लग इन गर्न सक्षम भए. तपाईंले रोज्नु भएको कन्भर्टरले फ्रिक्वेन्सी पनि परिवर्तन गर्नुपर्दछ ताकि तपाईं आफ्ना इलेक्ट्रोनिक्स सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ.
तपाईको इलेक्ट्रोनिक लेबलहरूमा हेर्नुहोस् जुन आवश्यक छ हेर्नका लागि. यदि तपाइँको लेबलले भन्छ 100-240V र /० / H० हर्ट्ज, यो विश्वको कुनै पनि ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ.
2. यात्रा कागजात
तपाईं बस्ने ठाउँमा निर्भर गर्दै, तपाइँ स्पेन भ्रमण गर्दा तपाइँलाई भिसा चाहिन सक्छ वा नहुन सक्छ. स्पेन ईयु को हिस्सा हो, युरोपबाट सबै आगन्तुकहरू स्वतन्त्र रूपमा आउन र जान सक्दछन्. संयुक्त राज्य अमेरिकाका आगन्तुकहरू शेंगेन सम्झौताको एक अंश हुन् जसले उनीहरूलाई देश भित्र रहन अनुमति दिन्छ 90 भिसा बिना दिन.
तपाईंले राहदानी ल्याउनु पर्छ, ड्राइभरको इजाजतपत्र र कुनै पालतू पशु कागजात (यदि तपाईं आफ्नो घरपालुवा जनावर संगै ल्याए). यदि EU मा, तपाईंलाई पाल्तु जनावर पासपोर्ट चाहिन्छ र घरपालुवा जनावरहरूको लागि माइक्रोचिप वा स्पष्ट रूपमा देखिने ट्याटू हुनुपर्दछ. स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, आयात अनुमति, खोप कागजातहरू र अन्य कागजातहरू गैर ईयू सदस्यहरूका लागि आवश्यक छ.
3. Vocre Translator + App डाउनलोड गर्नुहोस्
आजीवन मित्रहरू बनाउन चाहनुहुन्छ, खाना अर्डर गर्नुहोस् वा स्थानीयसँग कुराकानी गर्नुहोस्? यो गर्न गाह्रो छ यदि तपाईं स्पेनिश मास्टर्ड छैन भने. स्पेनमा यात्रा गर्दा, थाहा छ केहि वाक्यांशहरूले मद्दत गर्न सक्छ. तर जबसम्म तपाईंसँग बोल्ने धेरै अनुभव हुँदैन, तपाईंले पाउनुहुनेछ कि तपाईं उच्च-स्तर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्न.
Vocre एक अनुवाद अनुप्रयोग हो जुन भाषा अवरोधहरू भs्ग गर्दछ तपाईंले स्पेनमा सामना गर्नुपर्नेछ.
भाषा अनुवादकको रूपमा, तपाईले गर्नु पर्ने भनेको "हिट रेकर्ड" हो,”तपाई के चाहानुहुन्छ भन, र भोकरेले यसलाई पाठमा अनुवाद गर्दछ. तपाईं फोन झुकाएर पाठ स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ, र भोक्रेको भाषणले तपाइँ के चाहानुहुन्छ भनेर भन्नेछ तिम्रो लागि.
यो द्रुत र सजिलो छ धेरै भाषाहरूबाट स्पेनिशमा अनुवाद गर्न.
जब त्यहाँ कुनै भाषा अवरोधहरू छन्, तपाईं ट्याक्सीलाई ओड्न सक्नुहुन्छ, एक Airbnb होस्टसँग कुरा गर्नुहोस् वा शहर वरिपरि सजिलो प्राप्त गर्नुहोस्. यो सही तरिका हो स्पेनले प्रस्ताव गरेको सबै अनुभव गर्न.
अनुवाद गर्नको लागि मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् एन्ड्रोइड वा आईओएस सित्तैमा.
स्पेनमा एक मजबूत क्रेडिट कार्ड प्रणाली छ र लगभग सबै क्रेडिट कार्डहरू स्वीकार गर्दछ, तर त्यहाँ केहि अपवाद छन्. ट्याक्सीहरू, उदाहरण को लागी, हिट वा मिस हो, केहि क्रेडिट कार्ड स्वीकार गर्दै र अरुले यसलाई स्वीकार गर्दैनन्.
कार्ड तपाईंको राहदानीमा उही नामको रूपमा देखा पर्दछ. माइकल छोटो हुन सक्दैन माइक, र यसको विपरित.
तपाईं क्रेडिट कार्ड वा डेबिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न भन्ने दुर्लभ घटनाको लागि केही नगद वरिपरि बोक्न सिफारिस गरिन्छ. स्पेनले यूरो प्रयोग गर्दछ, र आफ्नो मुद्रा विनिमय गर्न को सजिलो तरीका एटीएममा डेबिट कार्ड प्रयोग गरेर हो. बैंकहरू, होटलहरू र ट्राभल एजेन्सीहरूसँग सँधै सजिलो तरीका तपाईंसँग आफ्नो मुद्रा साटासाट गर्न सक्छ.
5. आरामदायी हिंड्ने स्नीकर्स
स्पेन सुन्दर छ, समुद्री तटका साथ, ऐतिहासिक साइटहरू र धेरै प्रकृति हेर्नका लागि. धेरै मानिसहरू शहरको बाहिर एक रातको लागि आफ्नो उत्तम पोशाकको साथ भ्रमण गर्छन्, र जबकि यो एक राम्रो विचार हो, तपाईंको आरामदायी हिंड्ने जुत्ता साथ लान नबिर्सनुहोस्, पनि.
त्यहाँ छन् सुन्दर हिंड्ने सबै देश भर मा, मा सहित:
क्याटालोनिया, जहाँ चट्टानी पहाड ट्रेल्स र ओटा मैदानहरू प्रशस्त छन्
स्पेनिश पायरेनीस, जहाँ तपाईं मोन्टे पेरिडिडो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हिंड्न सक्नुहुन्छ
Alicante, जहाँ सुन्दर बदाम र सिट्रस खाद्यान्न प्रशस्त हुन्छन्
र जब शहर केन्द्रहरू र शहर वरिपरि हिंड्ने, ट्याक्सी सेवा वरपर तपाईं भरोसा गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईलाई आरामदायक जुत्ताको आवश्यक पर्दछ.
6. यात्रा तौलिया र टोट
पर्यटक र स्थानीयहरू स्पेनको सुन्दर समुद्री तटमा एकै किसिमले बटुल्छन्. रिसोर्ट्स यी क्षेत्रहरु स्प्याकल, र तपाइँ ब्राउज गर्न को लागी रात्रि क्लब र पसल को एक एर्रे पाउनुहुनेछ. सुन्दर समुद्र तटहरू देश भरि रहेका छन्, तर तपाईं अधिक अक्सर समावेश पाउनुहुनेछ:
रोडस बीच - एक धेरै सुन्दर, प्राय: सबै भन्दा राम्रोको रूपमा सूचीबद्ध, सुन्दर सेतो बालुवा समुद्र तट र नीलो पानी संग समुद्र तट
Ses Illetes बीच, Formentera मा स्थित, जुन Ibiza को पार्टी जीवन बिना एक अधिक शांत सेटिंग छ
ला Concha बीच, सान सेबास्टियनमा अवस्थित, एक सुन्दर शहर दृश्य र नजिकै बार र नाइटक्लबहरूको साथ पार्टी वातावरण प्रदान गर्दछ
एउटा यात्रा तौलिया र टोटले तपाईंलाई "समुद्र तट हप" गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंले धेरै जसो लोकप्रिय समुद्र तटहरू उच्च-सुविधा सुविधाहरू माइनस पाउनुहुनेछ जुन साना शहरहरूमा हुन्छन् जहाँ मानिसहरू भीडबाट भाग्न जान्छन्।.
7. घाँटी वालेट
स्पेन, युरोप मा धेरै देशहरु जस्तै, पिकपकेटको साथ समस्या छ. स्थानीयहरूले पर्यटकलाई भेट्ने छन् र उनीहरूको वालेटहरू चोर्नेछन र केहि तिनीहरूको भित्र तिनीहरू छन्. यसलाई रोक्नको लागि एक तरीका भनेको घाँटी वालेट लगाउनु हो जुन तपाईं आफ्नो शर्ट मुनि राख्नुहुन्छ.
तपाइँका सबै महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू यहाँ राख्नुहोस्, डेबिट कार्ड सहित, राहदानी र नगद. यसलाई आफ्नो शर्ट मुनि राख्दा तपाइँलाई पनि राख्छ सुरक्षित.
स्पेन सबैको लागि केहि प्रदान गर्दछ, राम्रो दृश्य देखि राम्रो खाना सम्म, सस्तो मूल्य र एक समृद्ध ईतिहास. यदि तपाईं माथिको हाम्रो सूचीबाट केहि आईटमहरू ल्याउँनुहुन्छ भने, स्पेनमा यात्रा हुनेछ अझ राम्राे – यदि सम्भव छ भने.